Raha tena tia tanindrazana … | NewsMada
Raha tena tia tanindrazana …
Par Taratra sur 10/07/2018
« … Efa fantatr’ireo mpampianatra hoe kely ny vola raisiny ka naninona raha mbola tsy nanomboka akory ny taom-pianarana dia efa nitokona ry zareo?…” Santionany tamin’ny resaky ny mpivarotra, sendra re, teny an-dalana, io. Midika izany fa, na toa misosa aza ny fiainan’ny Malagasy, misedra olana goavana ny firenena ary tena mitaintaina ny ray aman-dreny.
Volana vitsivitsy izao, efa tsy nianatra ny zanany, amin’ny sekolim-panjakana. Eny tokoa, toa misy fahamarinany io voalaza io. Azo ambara koa anefa hoe efa fantatry ny fanjakana ny hakelin’ny vola raisin’ireo mpampianatra koa nahoana no tsy itadiavam-bahaolana mihitsy ity raharaha ity?
Raha ny marina, mitovy ihany ny fototr’ireo olana amin’ny fiarahamonina samihafa mitranga eto amin’ity firenena ity. Tsy inona izany fa ny toe-tsaina, mihatsara ivelatsihy ho tia tanindrazana kanefa samy revo amin’izay ho an’ny tenany irery sy izay tombontsoany kely. Miainga amin’ny zavatra bitika sy toa tsy misy dikany io.
Raha mba misy tokoa mantsy izay toe-tsaina tia tanindrazana sy liam-pandrosoana izay, tokony hadio lalandava ny lalana sy ny elakela-trano ary ny lakandrano. Toy izany koa ny fifanajana amin’ny toerana rehetra aleha. Raha tiana tokoa i Madagasikara, inoana fa tsy hisy sahy hivarotra tanindrazana amin’ny vahiny sy hitady fomba mamohehitra hahatongavana amin’izany.
Raha eo tokoa ilay fitiavan-tanindrazana, angamba ny mpitondra, hivadika atidoha, tsy handry andro aman’alina hamolavola lalàna manome hasina ny fananan’ny Malagasy tany honenana. Tsy hitsitsy aina izy ireo, hitady loharanom-bola ho an’ireo tena miasa, toy ny mpampianatra, anisan’ny mamolavola ny hoavin’ity Nosy ity.
Raha misy tokoa ny fitiavan-tanindrazana, tsy hihambahamba ny mpitondra, hanao fitaratra ny fiainany, tsy ho re amin’ny resaka kolikoly sy kiantranoantrano. Raha tena tia tanidrazana ihany koa ny vahoaka, hanara-dia izany ka sady tsy hanome no tsy handray kolikoly… Betsaka ny azo ambara fa isika ihany io, hanova toe-tsaina sa hijanona ho ratsy saina?